How to make facebook comment in wordpress — MYSTERY ZILLION
How to make facebook comment in wordpress
November 2011 edited November 2011 in Wordpress
I want my wordpress blog with facebook comment.I have facebook fanpage and
I seem commnet at my blog.Explain exactly.Please help me? Thank You.
you have two options ... Search for the plug-ins or get your code at <a href="https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments/">Facebook Developer area</a>
I think you may needaphone number to active your application ID, I guess.
ကျွန်တော် plugin နဲ့စမ်းကြည့်ဖူးပါတယ် Facebook Developer id လိုပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ် ဒါမှမဟုတ် Credit Card no ဖြည့်ခိုင်းပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပေမယ့်အလုပ်မလုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားသလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ကျနော် လုပ်တုန်းကတော့ Facebook Comments plugin ကိုသုံးပြီး
App ID/API Key နဲ့ App Secret ကို ထည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ
app id နဲ့ app secret လုပ်ဖို့အတွက် developer acc လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ twitter တုံးကတော့လျှောလျှောလျူလျူပဲ
I'm using "Facebook Comments" plugin (http://blogwordpress.ws/plugin-facebook-comments). It's right for me. No need to add App ID/API Key and App Secrete. Try it now.